Qaraxii Cuslaa ee Sabtidii Muqdisho Ka Dhacay oo Saameeyay Ganacsiga & Isu-socodka Dadka iyo Gaadiidka - Jazeera FM
Qaraxii Cuslaa ee Sabtidii Muqdisho Ka Dhacay oo Saameeyay Ganacsiga & Isu-socodka Dadka iyo Gaadiidka
October 16, 2017 admin featured
Qaraxii ugu weynaa ee galaaftay nolosha in ka badan 230 qof ee ka dhacay Soobe/Km5 oo ah mid kamid ah isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho ayaa sababay khasaaro naf iyo hantiba isugu jirta iyo burbur baaxad weyn oo soo saaray goobihii ganacsi ee ku yaallay hareeraha isgoyskaas.
Qaraxa ayaa dhacay xilli aad u mashquul badan oo qaar kamid ah arday jaamacadaha iyo dugsiyada ay kasoo rawaxayeen goobaha waxbarashada. Goobta uu qaraxa ka dhacayna waxey marin u tahay oo ay isku xertaa gadiidka dadweynaha ee u kala goosha degmooyinka Xamarweyne, Dharkeynley, Wadajir, Xamarjajab, Hodan, Waaber iyo degmooyin kale.
Dadka qaraxa ku dhintay waxaa kamid ah 4 wiil oo carwo wadada uu qaraxa ka dhacay ku taalla xisaab xer u sameynayay.
Dhanka kale, marka laga soo tago dadkii tirada badnaa ee ku dhuntay waxaa meesha ku burburay hanti iyo goobo ganacsi oo isugu jiray maqaayado, dukaamo, hay’ado si gaar ah looleeyahay, shirkado duulimaad, kaalimo shidaal, Hotel Safari iyo xarunta KM5 ee bangiga IBS oo gebi ahaanba burburay.
Weli waxaa socda gurmadka ay sameynayaan shacabka, ciidanka dowladda iyo saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalada kala duwan. Waxaa xeran agagaarka wadada uu qaraxa ka dhacay. Magaalada Muqdishu guud ahaan si weyn ayaa loooga dareemayaa waxa dhacay.
Qaar kamid ah wariyayaasha Goobjoog Business oo u kuurgalay howlaha ganacsi ee magaalada ayaa soo arkay goobo ganacsi oo badan oo xerxeran, iyadoo ganacsatada qaar ay ku mashquulshanyihiin aasitaanka dadka dhintay, raadinta dadka lala’yahay, la tacaalidda dadka dhaawaca ah iyo dhiigsiinta dadka dhiigga u baahan.
Waxaa kale oo ay ciidamada dowladda xireen agagaarka isgoyska uu qaraxa ka dhacay. waxaana la joojiyay isticmaalka gaadiidka iyo dadkaba iyadoo ay weli socdaan dadaallo lagu baadigoobayo dad ay suurogaltahay in ay ku hoos jiraan dhismayaashii dumay ee ku yaallay hareeraha Soobe.
← DEG DEG: Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo shaaciyay inuu baaqday kulankii Final-ka Tartanka General Daa’uud.Maxay tahay sababta?…
Laacibkii hore ee Kooxda Manchester City iyo Xaaskiisa oo Wacad ku maray in ay is qaawin doonaan hadii,+sawirro ? →